Wararka - Kobaca Suuqa Collagen
Kobaca Suuqa Collagen
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay ee shisheeyaha, suuqa caalamiga ah ee kolajka ayaa la filayaa inuu gaaro US $ 7.5 bilyan sannadka 2027, iyadoo heerka dakhliga guud ee ku saleysan dakhliga uu yahay 5.9%. Kobaca suuqa waxaa loo aaneyn karaa baahida xoogan ee loo qabo kolajka loo isticmaalo qalliinka qurxinta iyo daaweynta bogsashada boogta. Horumarinta awoodda kharashka macaamiisha, oo ay weheliso caan ka ahaanshaha qalliinka maqaarka, waxay dhiirrigelisaa baahida caalamiga ah ee alaabada.
Cowhide, doofaarka, digaaga iyo kalluunka ayaa ah afarta ilood ee ugu weyn ee laga helo kolajiin. Marka loo barbardhigo ilo kale, laga bilaabo sanadka 2019, kolajka laga helo lo'da ayaa ah mid muhiim ah oo ah 35%, taas oo ay ugu wacan tahay hodantinimada ilaha bovinka iyo qiimaha yar ee la barbardhigo ilaha badda iyo doofaarka. Noolaha badda ayaa ka sarreeya kuwa ka yimaada lo'da ama doofaarka sababo la xiriira heerka nuugiddooda sare iyo bioavailability. Si kastaba ha noqotee, qiimaha badeecadaha ka soo baxa badda ayaa aad uga sarreeya kan ka yimaada lo'da iyo doofaarrada, taas oo la filayo inay xaddido koritaanka wax soo saarka.
Baahida weyn ee loo qabo badeecadan oo ah xasiliyaha cuntada, suuqa gelatin wuxuu fadhiisan doonaa booska ugu sarreeya sanadka 2019. Kobaca Kalluumeysiga ee Hindiya iyo Shiinaha ayaa soo jiitay soosaarayaasha gelatin ee gobolka Aasiya ee Baasifigga si ay kalluunka ugu isticmaalaan alaabta ceeriin ee wax soo saarka gelatin. Suuqa loo yaqaan 'collagen hydrolyzate' ayaa sidoo kale la filayaa inuu si dhakhso leh u koro muddada saadaasha, iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalkiisa sii kordhaya ee hagaajinta unugyada iyo codsiyada ilkaha ee daryeelka caafimaadka. Isticmaalka sii kordhaya ee loo yaqaan 'collagen hydrolysates' ee shirkadaha loogu talagalay daaweynta cudurrada lafaha la xiriira, sida osteoarthritis, ayaa gacan ka gaystay horumarinta aaggan.
Gelken, oo ah soosaaraha collagen iyo gelatin, waxaan ka walaacsanahay koritaanka suuqa kolajka. Waxaan sii wadaynaa inaan horumarino tikniyoolajiyadeena iyo istiraatiijiyaddeenna suuqa si aan ula kulanno baahida suuqa caalamiga ah ee kolajka. Oo weliba waxaan nahay alaab-qeybiyeyaasha collagen ee Vietnam iyo Ameerika oo leh qiime iyo tayo tartan leh.
Waqtiga boostada: Abriil-15-2021